UNESCO & Wasaaradda Isboortiga Faransiiska oo wada dhaleeceeyay cunsuriyaddii lagula kacay Blaise Matuidi – Gool FM
UNESCO & Wasaaradda Isboortiga Faransiiska oo wada dhaleeceeyay cunsuriyaddii lagula kacay Blaise Matuidi
Raage January 9, 2018
(Paris) 09 Jannaayo 2018 – Wasiirka Isboortiga ee Faransiiska iyo hay’adda dhaqanka iyo tacliinta ugu qaybsan QM ee UNESCO director general condemn “in the strongest possible terms” the racism suffered by Juventus midfielder Blaise Matuidi.
Laacibkii hore ee Paris Saint-Germain ayaa waxaa Sabtidii cunsuriyad kula kacay taageerayaasha Cagliari kulankii muranka dhaliyay ee ay Bianconeri 1-0 ku badisay.
Waloow ay kooxda Isolani raalli gelin bixiyeen, taasoo uu ka mahadceliyay Matuidi, balse taasi ma hakinin inay arrintani soo jiidato mucaaradad caalami ah.
“Cunsuriyaddu meel kuma laha ciyaaraha, garoonka gudihiisa iyo debaddiisaba,” ayaa lagu yiri shir jaraa’id oo wada jir ah oo ay wada qabteen UNESCO oo uu metelayay Audrey Azoulay iyo wasiirka ciyaaraha Faransiiska Laura Flessel.
“Codka ugu dheer baannu ku cambaaraynaynaa meel ka dhaca lagula kacay Blaise Matuidi, oo u safta Juventus iyo xulka Faransiiska.” ayay raaciyeen.
DAAWO: Xiddigihii hore ee AC Milan oo muuqaal wada jir ah ugu hambalyeeyay Gattuso
TOOS u daawo: Atletico Madrid vs Lleida - LIVE (Shaxda sugan)